Raad-raacii Duufaantii Harvey | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Harvey, oo laga arkay dayax gacmeedka
Toddobaad ayaa laga joogaa markii aan wax ka qoreynay duufaantii ku dhufan lahayd Texas, duufaanta duufaanka. Waxay xitaa gaartay qeybta 4, xoog aad uga weyn sidii la filayay. Khasaaraha ay ka tagtay ayaa aad uga badan inta laga filan karo. Iyo waqtigaan oo dhan karbaash aagga ayaa sii wadi doonta inay woqooyi u dhaqaaqdo iyadoo ah duufaan kuleyl ah maalmaha soo socda.
Khasaaraha la soo saaray waxaa sabab u ahaa inta badan Fadhiidnimada Harvey ee aagga, aad buu u dheeraaday isla goobta. Socdaalkan aan caadiga ahayn wuxuu sii xumeeyay daadadka ka dhacay Houston, ilaa heer laga garaaco diiwaanka daadadka ayaa soo gaadhay qaaradaha Mareykanka. Rikoorkii hore waxaa soo saaray Hurricane Amelia sanadkii 1978, iyadoo ugu badnaan ay roobkeedu gaarayo 48 inji. Harvey wuxuu garaacay 51,88 inji (in ka badan 1,30 mitir) Talaadada, waxaana la filayaa roob badan.
1 Trump ayaa booqday aagga ay dhibaatadu ka dhacday
1.1 Harooyinka buux dhaafiyay
2 Coldplay wuxuu sameeyaa "Houston" sharafka kuwa ay dhibaatadu saameysey
Trump ayaa booqday aagga ay dhibaatadu ka dhacday
Trump wuxuu u taagan yahay midnimo dhammaan dadka aagga ku waxyeeloobay (NBC News)
Xilliga uu Trump booqanayay aagga ay dhibaatadu ka dhacday, laba barkadood ayaa shalay buux dhaafiyay. Cawaaqibta Harvey ee ka carootay aagga sida haddii aysan waligeed baxsan doonin, ayaa lagu qasbay inay ka baxaan degmo koonfur-bari ka xigta Houston, aagga ugu badan ee ay saameysay.
Tirinta ayaa durba kor u dhaaftay 16 qof, kumanaan dad ah ayaa la badbaadiyay, tobanaan kunna waa laga daad gureeyay aagga, inta badan aagga Houston, hadda waa daadad. Sidoo kale waa magaalada afraad ee ugu dadka badan Maraykanka, oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan. Kharashyada waxyeellada ayaa durbaba sii kacaya heerkii ay ka tagtay duufaantii Katrina sanadkii 2005, oo sidoo kale dhacday intii u dhexeysay 23 ilaa 31 Agoosto.
Tani waxay leedahay saami tiradeed. Qofna weligiis ma arag wax la mid ah »Kuwani waxay ahaayeen ereyadii Donald Trump ee shirkii lagu qabtay Corpus Christi, oo uu guddoominayey Guddoomiyaha Gobolka Texas, Greg Abbot. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka faa’iideystay fursad uu ku aqoonsado kuna amaano shaqada meydadka iska kaashanaya gargaarka dadka ay dhibaatadu saameysey. Ku boorri oo ku dhiirrigeli in la sameeyo "si ka wanaagsan sidii hore", si 5 ama 10 sano gudahood aan loo odhan karin wax kasta oo suurtagal ah lama qaban. Qaar ka mid ah sawirrada Panorama waxaa laga soo duubay fiidiyowgaan oo laga helay wararka FOX. Dheeraad ah, Waxay kaloo faallo ka bixinaysaa cawaaqibka caabuqyada laga yaabo inay leeyihiin, cayayaanka sida kaneecada, xasaasiyada iwm.
Harooyinka buux dhaafiyay
Cawaaqibta ka dhalan karta buuxdhaafka keydadka, Barker iyo biyo xireennada Addick, ayaa ka muuqda sawirrada soo socda. Si aad u badan sidaas Waaxda Adeegga Saadaasha Hawada ee Qaranka waxay ku dartay khariidadda laba midab oo dheeri ah oo lagu cabbiro roobka. Taariikh ahaan, khariidada waxaa lagu xardhay 15 inji oo roob ah, laga bilaabo hadda furka cusub wuxuu noqon doonaa 30 inji. Waxaan arki karnaa kala duwanaanshaha cabbirka khariidada u muuqata daqiiqadda 1:20 fiidiyaha.
Roobabka laga filayo aagga waxay qiyaastii yihiin 5 inji maalintii 2/3 maalmood oo dheeri ah. Heerarka webigu waa kuwo taariikhi ah, sida daadadka oo kale. Waxaa la filayaa, marka lagu daro tirada dadka ay dhibaatadu saameysey, in maalmaha soo socda ilaa 450.000 qof ayaa codsanaya caawimaad wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhasha in la helo.
Coldplay wuxuu sameeyaa "Houston" sharafka kuwa ay dhibaatadu saameysey
Kooxda Ingiriiska, ayaa u hibeeyay hees la yiraahdo "Houston", oo markii ugu horreysay iyo markii ugu dambeysay ka dheelay riwaayad ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida. "Waxaan ku soo kornay jacaylka muusikada waddanka, waana taas waxa aan ka fikirno markaan tagno Texas"ayuu yiri Coldplay-singerwriter-songwriter oo si xamaasad leh u muujiyay intii lagu guda jiray riwaayadda.
Kumanaan qof ayaa ku darsaday gargaarka, sheekooyinka qaarkoodna waligood lama ogaan doono. Xitaa weriye joojiyay gaari booliis si uu u caawiyo darawal gaari xamuul ah oo aan ka soo dagi karin gaarigiisa. Ugu dambayntii ninka waa la badbaadin karay, isagoo uga mahadcelinaya mahadnaq iyo mahadnaq wixii ay u geysteen.
Waxaan sagootineynaa ka tagista duubista heestaan ​​Coldplay kanaalka rasmiga ah. Halkaan waxaan sidoo kale ka rajeyneynaa in magaaladan weyn ee lagugu diray hawada sare, ay ka soo kabaneyso sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Raad-raacii Duufaantii Harvey